Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida oo xukun ku riday mas’uul ka tirsanaa gobolka Banaadir | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida oo xukun ku riday mas’uul ka tirsanaa gobolka...
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida oo xukun ku riday mas’uul ka tirsanaa gobolka Banaadir
Muqdisho (Halqaran.com) – Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa Axaddii maanta xukun xabsi ku riday Masuul ka tirsanaa Maamulka Gobolka Banaadir oo lagu helay inuu Al-Shabaab ka tirsanaan jiray.
Maxkamadda Ciidamada ayaa xukun xabsi saddex sano ku riday Kusimihii Agaasimaha Shaqadda Gobolka Banaadir, Nuur Cali Axmed (Mahadalle) kadib markii lagu helay inuu horay uga mid ahaan jiray Al-Shabaab, Islamarkaana uusan soo marin habka is diiwaangelinta dadka ka haray fekerka Shabaabnimada.
Masuulkaan ayaa horey looga soo xiray Xarunta Maamulka Gobolka Banaadir, waxaana muddo ku socotay baaritaan.
Maxkamadda ayaa sidoo kale sii daysay Cabdullaahi Cabdiraxmaan Maxamed oo walaalo ay ahaayeen Basiiro oo la rumeysan yahay inay isku qarxisay Xarunta Maamulka Gobolka Banaadir.
Hay’adaha ammaanka ayaa la faray inay dusha kala socdaan dhaqdhaqaaqa Cabdullaahi, maadaama maxkamadda ay sii daysay.
Wiilkaan la dhashay Basiiro ayaa muddo xirnaa, waxaana ku socotay baaritaan ku aadan waxa uu ka ogaay nolosha Basiira.
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida oo xukun ku riday mas’uul